Wargeyska The Standard: Soomaaliya waxay horseed ka tahay dalalka "go'doomiyay" Kenya - Jigjiga Online
HomeSomalidaWargeyska The Standard: Soomaaliya waxay horseed ka tahay dalalka “go’doomiyay” Kenya
Nairobi (Jigjigaonline/The Standard) – Faalladan oo uu u qoray Macharia Munene oo ah faale qore sare oo ka tirsan warbaahinta Kenya, ayaa cinwaan looga dhigay “Soomaaliya ayaa deriska ku hoggaamineyso in Kenya cadaadis la saaro,”
Ugu horreyn, golaha wasiirrada ee xisbiga talada haya ee Jubilee ayaaa kala qeybsan, iyadoo mucaaradka madaxweyne Uhuru Kenyatta, ee gudaha xisbigiisa ay doonayaan inay sharciyadda ka qaadaan. Arrimaha siyaasadda gudaha, iyo caqabadaha dibedda ayaa tijaabo u ah hoggaanka Uhuru Kenyatta, iyo welibo inuu dalka ka saari karo caqabadaha soo wajahay.
Badda ay ku muransan yihiin Somaliya iyo Kenya
Soomaaliya oo qasan waxay u suuragelineysaa ayuu leeyahay inay ka howlgalaan badda Soomaaliya iyadoo aan lala xisaabtamin. Maraykanka ayaa Soomaaliya ka dhigtay goob ay ku tijaabiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo waxyaabo kale. Hindiya iyo Shiinaha waxay ku tartamayaan xaalufinta kalluunka badda Soomaaliya.
Wargayska ayaa sheegay in in kastoo saamenyta England ee dunida ay sii yaraanayso, kaddib codenytii ka bixintaanka Yurub, oo laga yaabo inay yaraato faraha ay kula jiraan arrimaha Soomaaliya, ayaa haddana waxaa laga yaabaa inay danahooda dhaqaale ku jirto hub inay ka iibiyaan waddamada sida weyn u iibsado, sida Cusmaaniyiinta cusub (Turkiga) iyo waddamada Carabta, ee hodanka ku ah saliidda. Usmaaniyiinta ayaa waqti badan iyo dhaqaale geliyo tababariidda ciidamada Soomaaliya. Waddamada Carabtana waxay ku andacoodeen in Soomaaliya ay Carab tahay, waxayna u digeen Kenya.
“Masaajidkayaga waxaa laga ogolyahay dhallinta timaha weyn iyo kuwa surwaalada jiidaya”